အကြော်တစ်ခု ကို ၅၀ ပါ… ၁၀၀ဖိုး ကို ၃ ခု ထားလိုက်…မရလို့ ပါကွယ်…၂၀၀ ဖိုး ၅ ခုတော့ ထားလိုက် ပါလို့ ပြောလိုက်သောအခါ… – Let Pan Daily
“ကျွန်တော် နဲ့အကြော်သည် အမေကြီး”အမှတ်တမဲ့ ပါပဲ နားထဲ ခပ်သဲ့သဲ့ကြားလိုက်တာပါ။
အကြော်တစ်ခုကို ဘယ်လောက်လဲ ?ကလေး တစ်ယောက်ကိုလက်ဆွဲပြီးတော့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်(ငွေကြေးပြည့်စုံတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းက ပုံစံမျိုးပါပဲ)အကြော်ဝယ်ဖို့မေးနေတဲ့ အသံပါ။
အကြော်တစ်ခု ကို ၅၀ပါ၁၀၀ဖိုးကို ၃ ခု ထားလိုက်မရလို့ပါကွယ်၂၀၀ ဖိုး ၅ ခုတော့ ထား…တအောင့်လောက်နေတော့..နောက်ထပ်ကြား လိုက်ရတယ်”လာ…သား…အကြော်တွေက ညစ်တီး ညစ်ပတ်နဲ့ မသန့်ရှင်းဘူး…မစားချင်နဲ့..သား”..ဆိုပြီး .ကလေးကို ဆွဲခေါ် သွားတယ်။
ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စား သွားတယ်…သေချာလှမ်းကြည့် လိုက်တော့…အသက်(၆၀)ကျော် အမေကြီး တစ်ယောက် အကြော်ရောင်းနေတာကို အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က ဈေးဆစ်နေတာ။သြော်..လူတွေများခက်လိုက်တာဗျာအကြော်ဝယ်ဖို့ဈေးဆစ်လို့မရတော့ညစ်ပတ်တယ်မစားနဲ့လို့ ပြောသွားတယ်။
ထိုအမျိုးသမီးရဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့အဆင့်အတန်းကို မဝေဖန်ချင်တော့ မစဉ်းစားချင်တော့အကြော်သည် အမေကြီးကို ကြည့်လိုက်တော့ အားငယ်သွားတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ထွက်သွားတယ်။
” ဟောဒီက…အကြော်ပူပူလေး…”ရင်ထဲမှာ တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ် ကျွန်တော် ကမန်းကတန်းလှမ်းခေါ်လိုက်တယ် အမေကြီး…
ခဏနေပါအုံးဗျ အကြော်ဝယ်ချင်လို့ပါပြန်လှည့်လာပြီး…အကြော်ဗန်းကို ချပေးတယ် ကြည့်လိုက်တော့ မုန့်ပေါင်းနဲ့ အကြော်လေးတွေက အစီအရီ…ဗန်းထဲမှာ စားချင်စဖွယ်သန့်သန့်ရှင်းရှင်း လုပ်ထားတာပါ။(စဉ်းစားမိတယ်.းနေရဲ့ အပူရှိန်အောက်မှာ အကြော်တွေက မနက်က ကြော်ထား တာဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အပူရှိန်ကြောင့် အကြော်တွေက ပူနေမှာမလွဲ
အကြော်ပူပူလေး လို့ အော်ရောင်းတာ နဲ့ အကိုက်ပဲ)သြော်..ဒီအသက်အရွယ် နဲ့ နေပူပူမှာ ဘယ်လောက်ပင်ပမ်း ရှာလေမလဲ….ငါ့အမေ များ ဒီလိုဆိုရင် ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့. ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။
အမေကြီး ” အကြော် တစ်ခု ဘယ်လောက်လဲ” သိပေမယ့် ထပ်မေး လိုက်တယ်…” အကြော်တစ်ခု (၅၀)ပါ သားလေးရယ်”(နောက်ထပ်ဈေးဆစ် မှာရောင်းမကောင်းမှာ စိုးရိမ်နေပုံ ပါပဲ..မျက်နှာပေါ်ကချွေးစက်တွေ ကို သဘက် နဲ့သုတ်ရင်း ခပ်တိုးတိုးဖြေတယ်)
” အမေကြီး အကြော်တွေက စားချင်စရာပဲ..စားကောင်းမယ့်ပုံ ပဲဗျ ” ..ဆိုပြီး အကြော် တစ်ခုကို ကောက်ဝါးလိုက်တယ်။(သူ့ခမျာ အမောပြေ သဘောကျ သွားပုံပဲ.ညှိုးငယ်နေတဲ့ မျက်နှာချက်ခြင်းပြုံး လာတယ် ဝမ်းသာသွားပုံပဲ)
” အရသာရှိတယ် အမေကြီးး.ရုံးက လူတွေလည်း ကျွေးချင်လို့..အကုန်လုံး ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကျလဲ “လို့ မေးပြီး..ငါးထောင်တန် တစ်ရွက်ထုတ် ပေးလိုက်တယ် အကြော်တွေထည့်ရင်းနဲ့… ဗန်းအောက်က ငါးရာတန် နဲ့နှစ်ရာတန် အနွမ်းလေးတွေ တုန်တုန်ရီရီနဲ့ ထုတ်ရေပြီး..ပြန်အမ်း ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။” ရတယ် အမေကြီး..ပြန်မအမ်း ပါနဲ့တော့” ..
ဆိုတော့..” မဟုတ်တာ သားလေးရယ်” တဲ့” ရတယ်..ပိုတာ ကို ကုသိုလ် လုပ်တာပါ”လို့ပြောလိုက်ရော….” ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ စိတ်ကောင်း ရှိလိုက်တာ သားလေးရယ်။ အိမ်က သားတွေများ ဒီလို သိတတ်ရင် ဆိုပြီး ပုခုံးပေါ်တင်ထားတဲ့ သဘက် အနွမ်းလေးနဲ့ မျက်ရည်စတ ချို့ကို ဖျတ်ခနဲသုတ်ရှာတယ်။
“ရင်ထဲမှာ မကောင်း မိဘချင်းကိုယ်ချင်းစာစိတ် နဲ့ မျက်ရည်လည်မိတယ်”” အမေကြီး အသက်ဘယ်လောက် ရှိပြီလဲ ဆိုတော့(၆၅)နှစ်တဲ့ ကျွန်တော့်အမေနဲ့ အသက်သိပ်မကွာအသက်သိပ်မကွာ။လောကဒဏ် ရဲ့ရိုက်ပုတ်မှုပင်ပမ်း ဆင်းရဲမှုတွေကြောင့် အမေ့ထက်တောင် အများကြီး အိုစာနေပါလား။
တကယ်ဆို ဒီအရွယ်က ဘုရားရိပ်..တရားရိပ် မှာ..တရား အားထုတ်ပြီး အေးအေးချမ်းချမ်းနေရမယ့် အရွယ်လေ” သားသမီးတွေ ရှိလားလို့လည်း ကျွန်တော် မမေးချင်တော့ပါ….သားသမီးတွေက မထောက်ပံ့ကြဘူးလား လို့လည်း မမေးချင်တော့ပါ…ဒီလို ပင်ပင်ပန်းပန်း ဈေးရောင်းနေကြရတဲ့ အမေမျိုးတွေ မြန်မာပြည် မှာ ဘယ်လောက်တောင် ရှိနေမလဲ…ကျွန်တော်ကကော ဘယ်နှစ်ခါ ဘယ်လောက် ကူညီနိုင်မှာမို့လဲ။
တကယ်တော့ ….လူတိုင်းရဲ့ ရင်ထဲမှာ ကိုယ်ချင်းစာ နားလည်တတ်တဲ့ စိတ် သားသမီး တိုင်းရဲ့ ရင်ထဲမှာ..မိဘကျေးဇူးကိုသိတတ်နားလည်လုပ်ကျွေးပြုစုချင်တဲ့စိတ် လူသားတိုင်းရဲ့ ရင်ထဲမှာ ကိုယ်စီတာဝန်ကျေနားလည်မှုတွေ.ရှိနေကြမယ်ဆိုရင်…
“ကြှနျတျော နဲ့အကွျောသညျ အမကွေီး”အမှတျတမဲ့ ပါပဲ နားထဲ ခပျသဲ့သဲ့ကွားလိုကျတာပါ။
အကွျောတဈခုကို ဘယျလောကျလဲ ?ကလေး တဈယောကျကိုလကျဆှဲပွီးတော့ အမြိုးသမီးတဈယောကျ(ငှကွေေးပွညျ့စုံတဲ့ အသိုငျးအဝိုငျးက ပုံစံမြိုးပါပဲ)အကွျောဝယျဖို့မေးနတေဲ့ အသံပါ။
အကွျောတဈခု ကို ၅၀ပါ၁၀၀ဖိုးကို ၃ ခု ထားလိုကျမရလို့ပါကှယျ၂၀၀ ဖိုး ၅ ခုတော့ ထား…တအောငျ့လောကျနတေော့..နောကျထပျကွား လိုကျရတယျ”လာ…သား…အကွျောတှကေ ညဈတီး ညဈပတျနဲ့ မသနျ့ရှငျးဘူး…မစားခငျြနဲ့..သား”..ဆိုပွီး .ကလေးကို ဆှဲချေါ သှားတယျ။
ကြှနျတျော စိတျဝငျစား သှားတယျ…သခြောလှမျးကွညျ့ လိုကျတော့…အသကျ(၆၀)ကြျော အမကွေီး တဈယောကျ အကွျောရောငျးနတောကို အမြိုးသမီးတဈယောကျက ဈေးဆဈနတော။သွျော..လူတှမြေားခကျလိုကျတာဗြာအကွျောဝယျဖို့ဈေးဆဈလို့မရတော့ညဈပတျတယျမစားနဲ့လို့ ပွောသှားတယျ။
ထိုအမြိုးသမီးရဲ့ စိတျဓာတျနဲ့အဆငျ့အတနျးကို မဝဖေနျခငျြတော့ မစဉျးစားခငျြတော့အကွျောသညျ အမကွေီးကို ကွညျ့လိုကျတော့ အားငယျသှားတဲ့ မကျြနှာလေးနဲ့ထှကျသှားတယျ။
” ဟောဒီက…အကွျောပူပူလေး…”ရငျထဲမှာ တျောတျောလေးစိတျမကောငျးဖွဈသှားတယျ ကြှနျတျော ကမနျးကတနျးလှမျးချေါလိုကျတယျ အမကွေီး…
ခဏနပေါအုံးဗြ အကွျောဝယျခငျြလို့ပါပွနျလှညျ့လာပွီး…အကွျောဗနျးကို ခပြေးတယျ ကွညျ့လိုကျတော့ မုနျ့ပေါငျးနဲ့ အကွျောလေးတှကေ အစီအရီ…ဗနျးထဲမှာ စားခငျြစဖှယျသနျ့သနျ့ရှငျးရှငျး လုပျထားတာပါ။(စဉျးစားမိတယျ.းနရေဲ့ အပူရှိနျအောကျမှာ အကွျောတှကေ မနကျက ကွျောထား တာဖွဈနိုငျပမေယျ့ အပူရှိနျကွောငျ့ အကွျောတှကေ ပူနမှောမလှဲ
အကွျောပူပူလေး လို့ အျောရောငျးတာ နဲ့ အကိုကျပဲ)သွျော..ဒီအသကျအရှယျ နဲ့ နပေူပူမှာ ဘယျလောကျပငျပမျး ရှာလမေလဲ….ငါ့အမေ မြား ဒီလိုဆိုရငျ ဆိုတဲ့ အတှေးနဲ့. ကိုယျခငျြးစာစိတျမကောငျးဖွဈမိတယျ။
အမကွေီး ” အကွျော တဈခု ဘယျလောကျလဲ” သိပမေယျ့ ထပျမေး လိုကျတယျ…” အကွျောတဈခု (၅၀)ပါ သားလေးရယျ”(နောကျထပျဈေးဆဈ မှာရောငျးမကောငျးမှာ စိုးရိမျနပေုံ ပါပဲ..မကျြနှာပျေါကခြှေးစကျတှေ ကို သဘကျ နဲ့သုတျရငျး ခပျတိုးတိုးဖွတေယျ)
” အမကွေီး အကွျောတှကေ စားခငျြစရာပဲ..စားကောငျးမယျ့ပုံ ပဲဗြ ” ..ဆိုပွီး အကွျော တဈခုကို ကောကျဝါးလိုကျတယျ။(သူ့ခမြာ အမောပွေ သဘောကြ သှားပုံပဲ.ညှိုးငယျနတေဲ့ မကျြနှာခကျြခွငျးပွုံး လာတယျ ဝမျးသာသှားပုံပဲ)
” အရသာရှိတယျ အမကွေီးး.ရုံးက လူတှလေညျး ကြှေးခငျြလို့..အကုနျလုံး ဆိုရငျဘယျလောကျကလြဲ “လို့ မေးပွီး..ငါးထောငျတနျ တဈရှကျထုတျ ပေးလိုကျတယျ အကွျောတှထေညျ့ရငျးနဲ့… ဗနျးအောကျက ငါးရာတနျ နဲ့နှဈရာတနျ အနှမျးလေးတှေ တုနျတုနျရီရီနဲ့ ထုတျရပွေီး..ပွနျအမျး ဖို့ ကွိုးစားနတေယျ။” ရတယျ အမကွေီး..ပွနျမအမျး ပါနဲ့တော့” ..
ဆိုတော့..” မဟုတျတာ သားလေးရယျ” တဲ့” ရတယျ..ပိုတာ ကို ကုသိုလျ လုပျတာပါ”လို့ပွောလိုကျရော….” ကြေးဇူးတငျလိုကျတာ စိတျကောငျး ရှိလိုကျတာ သားလေးရယျ။ အိမျက သားတှမြေား ဒီလို သိတတျရငျ ဆိုပွီး ပုခုံးပျေါတငျထားတဲ့ သဘကျ အနှမျးလေးနဲ့ မကျြရညျစတ ခြို့ကို ဖတျြခနဲသုတျရှာတယျ။
“ရငျထဲမှာ မကောငျး မိဘခငျြးကိုယျခငျြးစာစိတျ နဲ့ မကျြရညျလညျမိတယျ”” အမကွေီး အသကျဘယျလောကျ ရှိပွီလဲ ဆိုတော့(၆၅)နှဈတဲ့ ကြှနျတေျာ့အမနေဲ့ အသကျသိပျမကှာအသကျသိပျမကှာ။လောကဒဏျ ရဲ့ရိုကျပုတျမှုပငျပမျး ဆငျးရဲမှုတှကွေောငျ့ အမထေ့ကျတောငျ အမြားကွီး အိုစာနပေါလား။
တကယျဆို ဒီအရှယျက ဘုရားရိပျ..တရားရိပျ မှာ..တရား အားထုတျပွီး အေးအေးခမျြးခမျြးနရေမယျ့ အရှယျလေ” သားသမီးတှေ ရှိလားလို့လညျး ကြှနျတျော မမေးခငျြတော့ပါ….သားသမီးတှကေ မထောကျပံ့ကွဘူးလား လို့လညျး မမေးခငျြတော့ပါ…ဒီလို ပငျပငျပနျးပနျး ဈေးရောငျးနကွေရတဲ့ အမမြေိုးတှေ မွနျမာပွညျ မှာ ဘယျလောကျတောငျ ရှိနမေလဲ…ကြှနျတျောကကော ဘယျနှဈခါ ဘယျလောကျ ကူညီနိုငျမှာမို့လဲ။
တကယျတော့ ….လူတိုငျးရဲ့ ရငျထဲမှာ ကိုယျခငျြးစာ နားလညျတတျတဲ့ စိတျ သားသမီး တိုငျးရဲ့ ရငျထဲမှာ..မိဘကြေးဇူးကိုသိတတျနားလညျလုပျကြှေးပွုစုခငျြတဲ့စိတျ လူသားတိုငျးရဲ့ ရငျထဲမှာ ကိုယျစီတာဝနျကနြေားလညျမှုတှေ.ရှိနကွေမယျဆိုရငျ…